ဘုရားသခင် ငါ့ကို စကားပြောခဲ့တယ်! ….တစ်ကယ်လား?
သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်၏ ဆုကျေးဇူး ကိုယုံကြည်သော ကျွန်တော်တို့၏ အဖွဲ့အစည်း များတွင်၊ “ဘုရားသခင် ငါ့ကို စကား ပြောတယ်” လို့ မကြာခဏ ပြင်းပြစွာ လူတွေပြောတာ ကြားဖူးလေ့ ရှိတတ်ပါတယ်….! ထိုကဲ့သို့ပြောဆို ခြင်းသည် ဘာကို ဆိုလိုသနည်း? ထိုအရာ မှန်နိုင်သလော?
ယေရူ ကိုယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့်၊ ၀ိညာဉ်တော် ကိုအထဲ၌ ရရှိ အသက်ရှင် စေနိုင်ပါသည်။ ရောမ ၈း၉ ၊ ၁၁ ၊ ၁၁ - “ဘုရားသခင်၏ ၀ိညာဉ်တော်သည် သင်တို့ အထဲ၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူ၏….” “ဘုရားသခင်၏ ၀ိညာဉ်တော်သည် သင်တို့ အထဲ၌ ကျိန်းဝပ်တော်မူလျှင်…” “သင်တို့ထဲ၌ ကျိန်းဝပ်သော ၀ိညာဉ်တော် အား ဖြင့်…”
အထဲ၌ရှိသော ၀ိညာဉ်တော်ဘုရား၏ မျက်မှောက်တော် အားဖြင့်၊ ငါတို့သည် ၀ိညာဉ်တော်၏ ပဲ့ပြင်မူ ကိုခံနိုင်သည်။ ရောမ ၈း၁၄- “ဘုရားသခင်၏ ၀ိညာဉ်တော် ပဲ့ပြင်တော် မူသမျှ သောသူတို့ သည် ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်ကြ၏။” ဤကဲ့သို့သော အတွင်းလူ၏ဦးဆောင်ခြင်းသည် အချိန်တိုင်း မခံစား နိုင်သည့်တိုင်အောင်၊ နေ့တိုင်း ခံစား နိုင်သည်။
ဤကဲ့သို့ အဆက်မပြတ်သော “ဦးဆောင်ခြင်း”သည် ဣသရေလ ပရောဖက် များ၏ ဦးဆောင်မူ အတွေ့အကြုံ (ဓမ္မရာဇ၀င်ပဌမစောင် ၁၀း၁၀-၁၃၊ ယောလ ၂း၂၈-၂၉) နှင့်် ထာဝရဘုရား၏ လူအပေါင်းတို့သည် ပရောဖက် ဖြစ်ကြပါစေသော၊ ထာဝရဘုရား၏ ၀ိညာဉ်တော်ကိုသူတို့ အပေါ်မှာ တင်တော်မူပါစေသော (တောလည်ရာကျမ်း ၁၁း၂၉) ဟုမောရှေ၏ ဆုတောင်းချက် ပြည့်စုံခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ပဋိညာဉ်သစ် ၏ ကိ်ျန်းဝပ်ခြင်း အသက်တာသည် ပညတ္တိကျမ်း နှင့်ပရောဖက်ကျမ်းကာလ၌ ဘုရားကိုတွေ့ကြုံခြင်း ထက်သာ၍ ထူးကဲပြီး ၊ အဆက်မပြတ်သော၊ ပို၍အတွင်းကြသောအရာ၊ အပြုဆန်သောအရာနှင့် သွန်သင်ခြင်း သဘော ဖြစ်သည်။
လူ့အတွင်း နှလုံးထဲ၌ အတွေးများသည် မြစ်ရေအလား အမြဲမပြတ် စီးဆင်း နေပါသည်။ တစ်ချို့သောအတွေးသည် ၀ိညာဉ်သဘော ရှိပြီး၊ တစ်ချို့ သည် ဇာတိသဘောရှိသည်။ ရောမ ၈း၆ - “ဇာတိပကတိစိတ် သဘော သည် သေခြင်း အကြောင်းဖြစ်၏၊ ၀ိညာဉ်ပကတိစိတ်သဘောသည် အသက်ရှင်ခြင်း အကြောင်း နှင့် ငြိမ်သက်ခြင်း အကြောင်းဖြစ်သည်”။ ကျွန်တော်တို့ ၀ိညာဉ်ထဲမှစိတ်ထဲသို့ ၀င်ရောက်လာသောအတွေးတခုရှိပြီး၊ ထိုအတွေး သည် ဘုရားသခင်၏ ၀ိညာဉ်တော်နှင့်ဆက်စပ်လျှက်ရှိသည်။ နောက် အတွေးတစ်ခုသည် ဇာတိစိတ် မှအာရုံသို့ ၀င်ရောက်လာသော အတွေးဖြစ်ပြီး၊ ထိုအတွေးသည် ၀ိညာဉ်ဆိုးထိန်းသိမ်း လွမ်းမိုးထားသော လောက နှင့် စပ်ဆိုင် သည့်အတွေးဖြစ်သည် (ဧဖက် ၂း၂)။
တစုံ တစ်ယောက်က “ငါ့ကိုဘုရား စကားပြောတယ်” ဆိုရာတွင်၊ သူ၏ ဆိုလိုရင်းသည် “ငါ့ဝိညာဉ်ထဲကနေ ငါ့အတွင်းစိတ်ထဲသို့ ရောက်လာသော ရှင်းလင်းတဲ့ အတွေး တစ်ခုခံစားရတယ်၊ ဒီအတွေးသည်ဘုရားဝိညာဉ်တော်ထံမှဖြစ်ပေါ် ရောက်ရှိကြောင်း ယုံကြည်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပေသည်။” “ဘုရားငါ့ကိုစကားပြောတယ်” ဟုလွယ်လွယ် ပြောခြင်းသည် မသင့်တော် သော အပြုအမူ များဖြစ်နိုင်သည်။” သို့ပါ၍ လွဲမှားမူ မရှိစေ ရန် မိမိကိုကိုယ် ရှင်းလင်းစေရ ပါမည်။ ထိုသို့ မဟုတ်ပါက သူတစ်ပါး ဆီမှာ ဘုရားငါတို့ကို ဖွင့်ပြကြောင်း မှားယွင်းစွာ ပြောဆိုခြင်းသာ ဖြစ်နိုင်ပေသည်။
ကျယ်လောင်သောအသံအားဖြစ် ဘုရားစကားပြောခြင်း မဟုတ်သော်လည်း၊ နှလုံးသားထဲ၌ဖြစ်ပေါ်လာသော“ပြင်းပြသည့်စိတ်ခံစားမူ” အားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ရောမ ၈း၁၆ - “... ၀ိညာဉ်တော်သည် ငါတို့ ၀ိညာဉ်နှင့် အတူ သက်သေခံ တော်မူသည်” အာဟုတ်ပါလား! ဤကဲ့သို့ပြောဆိုခြင်းသည် “ဘုရားငါ့ကို စကားပြောတယ်” ဟုဆိုခြင်းထက်သာ၍ရှင်းလင်းပြီး နားလည်နိုင် ဖွယ်ဖြစ် ပေသည်။
ဤကဲ့သို့ရှင်းလင်းခြင်းသည် နှိမ့်ချခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေသည်။ အသစ် ရောက် လာသော သူစိမ်းများအတွက်လည်းနားလည်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ ထိုမျှသာမက မှားယွင်းသော ပရောဖက်ပြုခြင်း ကိုမြင်တွေ့ရလို့ စိတ်ထဲရှုပ်ထွေးနေ သူများ အတွက်ပင် ၀ိညာဉ်ဆု ကျေးဇူး မငြင်းပယ်မိ စေရန် ကူညီပေးပါ လိမ့်မည်။
အသိစိတ် သက်သေ ခံခြင်း
ဤ သုံးခုမြောက်သတင်း စကားသည် မီးပွိုင့် စိမ်းလျှင် - “သွား”, အ၀ါ - “သတိ”, သို့မဟုတ် အနီ - “ရပ်” ကဲ့သို့သောအရာ ဖြစ်သည်။ ရောမ ၂း၁၅- “ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်နှလုံးသည်သက်သေခံသဖြင့်၎င်း၊ အချင်းချင်း ဆွေးနွှေးဆင်ခြင်၍အပြစ်တင်လျက်၊ လွှက်လျက်နေသဖြင့်၎င်း၊ မိမိတို့ စိတ်နှလုံးထဲ၌ မှတ်သားသော တရား၏ အကျိုးကို ထင်ရှားစွာပြကြ၏။” လူအများသည် အတွင်း၌ဖြစ်သော အတွေးများကိုအသိအမှတ် ပြုကြ ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဘုရားစကားပြောသည် ကို သေချာစွာ နားလည်ရန် နှင့် ပြောပါက၊ မည်ကဲ့သို့ ဘာသာပြန်မည်နည်း။
“သက်သေခံခြင်း” ဆိုသည်မှာ ဘုရားနှင့် ဆက်သွယ်ရာ၌ အသုံးခံသော ၀ိညာဉ်အစိတ်အပိုင်းဆိုင်ရာ အသိစိတ်ကိုဆိုလိုသည်။ထို့ကြောင့် ဘုရားသတင်းစကား သည် အမြဲတမ်းရှင်းလင်းသော သဘောရှိသည်။ ရောမ ၉း၁ - “ငါ့ကိုယ်တိုင် သိသော စိတ်သည် သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော် နှင့် တကွငါ့ဘက်၌သက်သေခံလျက်”။ သင်ဘုရားဆီက ရသောသတင်းစကားသည် ဘုရားဝိညာဉ်တော်ထံမှတဆင့် သင့်ဝိညာဉ် နှင့် အသိစိတ်သို့ ရောက်ရှိ ကြောင်းသတိပြုပါ။
သင့်နှလုံးသားကိုလွှမ်းမိုးသောအရာသည်သင်အဘယ်အရာကိုဘယ်လိုနားလည်သည်ကိုလည်းလွှမ်းမိုးသည်။ ပရောဖက်သတင်းစကားများကို သမ္မာတရားအတိုင်း ဆင်ခြင်ရာ၌၊ မိမိကိုလွှမ်းမိုး သော အရာသည်လည်း အရေးပါလာသည်။ ငါတို့သည် ပရောဖက်ဥာဏ် နှင့်မစုံမလင် ဟောတတ် ကြ၏ (ကောရိန္တုသြ၀ါဒစာ ပဌမစောင် ၁၃း၉)။
မမှန်ကန်သော ပရောဖက်ပြုခြင်း ဆိုင်ရာ အမှားယွန်း နှင့် ဘာသာရေးဆန်လွန်းသော အပြုမူတစ်ခုခု ကြောင့် ဘာဝမှာ ဒုက္ခတွင်းထဲနစ် နေသူ များထံမှ ခွင့်လွတ်ခြင်း ကိုနှိမ့်ချစွာတောင်းခံကြရအောင်။ ပို၍စစ်မှန်သော၊ တိကျသော ပရောဖက်ဆိုင်ရာ ဆုကျေးဇူးများကို ငါတို့သည် အလိုရှိကြပါစို့။
ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ ပွဲတော် ဗီဒီယို ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
သင့်ရက်စွဲကို အမှတ်အသားလုပ်ပြီး၊ အစ္စရေး နိူးထစေရေး ကိုးကွယ်ခြင်း အခန်းတွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တက်ရောက်ရန်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့၏ အွင်လိုင်းပေါ်က ထုတ်လွင့်သော ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ (မတ်လ ၄၊ ၂၀၁၅ နံနက် ၉း၀၀ မှ ၂၁း၀၀ ဒေသ စံတော်ချိန်)၌ ဆုတောင်းခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်းတွင် ပါဝင်ပါ။
ဘုရား၏ နာမ - Yehovah
ဒီသတင်းစကားထဲ၌ (တရုတ်လို ဘာသာပြန်ခြင်းနဲ့) Youval ကဟေဗြဲလို (Yehovah)ဟူသော ဘုရား၏နာမတော် အနက်နှင့်Yehovahသည် Yeshua (ယေရူ) နှင့် မည်ကဲ့သို့ ဆက်စပ် ကြောင်းကို ရှင်းပြထားပါသည်။ ကြည့်ရန်၊ ဒီမှာ နှိပ်ပါ!
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က အကြမ်းဖက်သမားများ၏တရားဇရပ်ကိုတိုက်ခိုက် မူ ကြောင့် ဒီမ်းမတ်နိုင်ငံ အစိုးရ နှင့် ပြည်သူများသည် ဂျူးအဖွဲ့အစည်းများအား ပို၍ ခိုင်မာသည့် ထောက်ခံမူများ ပြသလာကြသည်။
အစ္စရေး လူမျိုးများ၏ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စည်းရုံမူသည် အပတ်စဉ် ပိုပို၍ “ဆန့်ကျင်မူနှင့်အန္တရာယ်”ဖြစ်လာသည်။ မတ်လမှာကျရောက်လာ မဲ့အစိုးရ သစ်သည် ဘုရားအလိုတော်အတိုင်း ဖြစ်နိုင်မည့်အကြောင်း ဆုတောင်း ပေးပါ။
အိဂျစ်နိုင်ငံသား ခရစ်ယာန် ၂၁ ဦးကို ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ခေါင်းဖြတ်သတ် ခဲ့ပြီးနောက်၊ အိဂျစ်သမ္မတ AI Sisi က Sinai မှာရှိတဲ့ ISIS အဖွဲ့ရဲ့ စခန်း ကို လေတပ်ဖြင့်တိုက်ခိုက်ဖို့ အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ နားလည်ရမယ့် အချက်က၊ ခရစ်ယာန် များကသာ မူဆလင်ဘာသာဝင် ၂၁ ကိုသတ်မိပါက သို့မဟုတ် ပါလာစတိုင်း နိုင်ငံသား ၂၁ ဦးကို အစ္စရေး လူမျိုးများက သတ်မိပါက တစ်ကမ္ဘာလုံးကမည်ကဲ့သို့ပင် လက်စားချေး မည်နည်း?